Waxa lagu arko Jaipur | Wararka Safarka
Mariela Carril | 14/10/2021 17:00 | La cusbooneysiiyay 14/10/2021 20:15 | Hindiya, Maxaa la arkaa
Hindiya Waa waddan aad u weyn oo mid ka mid ah gobollada curinaya waa Rajasthan, oo caasimaddiisu tahay magaalada quruxda badan ee soo jiidashada leh Jaipur Waxaan ka hadli doonnaa maanta maxaa yeelay waxay ka mid tahay meelaha ugu dalxiiska badan dalka.
Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan Hindiya waxayna leedahay naanays qurux badan: "Magaalada Pink", sababtoo ah haddii uu jiro midab u badan dhismayaasha dhexdooda, waa taas. Sidoo kale, ilaa 2019 Jaipur es Dhaxalka Aduunka. Maanta markaa waxa lagu arko Jaipur.
2 Waxa lagu arko Jaipur
Waa kan caasimadda gobolka Rajasthan, waxaa deggan 3 milyan qof oo sidaas, waa magaalada tobnaad ee ugu dadka badan Hindiya. Intaa waxaa dheer, sidaan kor ku sheegnay, waa goob dalxiis oo heer sare ah ilaa iyo markaas Waxay ku taal wareegga Saddex -geeslaha Dahabka ah taas oo ka dhigaysa Delhi iyo Agra. Delhi waxay u jirtaa qiyaastii 240 kiiloomitir Agra 149 km, marka lagu daro xaqiiqda ah in Jaipur lafteedu badiyaa u tahay gundhigga magaalooyinka kale sida Kota, Udaipur ama Mount Abu ...
Jaipur waxaa aasaasay Boqorka Amer 1727kii iyada oo ujeedadu tahay in caasimadeeda laga raro Amer loona wareejiyo magaaladan cusub maadaama ay jireen dad badan iyo biyo yari. A) Haa, Jaipur waa la fikiray, la qorsheeyay oo la dhisay. Qorshaha waxaa loo qaybiyay sagaal baloog, laba ka mid ah oo leh dhismayaal dadweyne iyo daarro iyo inta kale oo loogu talagalay dadka caadiga ah. Toddobo irdood oo deyr leh iyo dhowr dariiqo oo aad u waaweyn ayaa lagu daray.
Fue 1876 ​​-kii magaalada waxaa lagu rinjiyeeyay casaan, munaasabadda booqashada Amiirka Wales Albert, Boqorka mustaqbalka Edward VII. Maanta wax badan ayaa ka hadhay midabkaas asalka ah waana sababtaas sababta loogu yeedhay Jaipir Magaalada Pink.
Cimiladu waa aad u kulul xagaaga, oo qoyan, iyo jiilaalku waa khafiif waana gaaban yihiin. Roobku aad buu u da'ayaa inta u dhaxaysa Luulyo iyo Ogosto, sababtuna waa marinka monsoon, oo haddii aad tagto xagaaga u diyaargarow in ay jiri karaan maalmo taabanaya 48 ºC. Cabsi.
Mabda 'ahaan Dhismaha Qasriga kaas oo ku dhex yaal magaalada deyrka leh. Waxaa u maleeyay Boqor Maharaja Sawai Jai Singh II, aasaasihii, waana isku -dhaf aad u qurux badan oo ah laba qaab dhismeed, Mughal iyo Rajput. Wali maanta, qaybo ka mid ah dhismaha, ku noolow qoyska boqortooyada.
Kakan waxaa ka mid ah Mubarak mahal ama qasriga soo dhaweynta, the Qasriga Maharani ama qasriga boqoradda. Maanta qasrigii ugu horreeyay wuxuu ku yaal madxafka boqortooyada kan labaadna wuxuu soo bandhigayaa hub qadiimi ah laga soo bilaabo qarnigii XNUMX -aad, laakiin sidoo kale waa dhisme aad u qurux badan oo sawirro saqafyada saqafka ku leh oo ilaa maanta aad u muuqda.
Mid ka mid ah kaararka ugu caansan Jaipur waa Xaawo Mahal, ama Qasriga Dabaylaha. Waxaa la dhisay 17879kii abwaan boqor Sawai Pratap Singh oo ahaa dib u gurasho xagaaga qoyska. Daaqadaha aan la tirin karin ayaa qoyska boqortooyadu dibadda ka eegi karaan iyadoon la arkin.
Dhismuhu wuxuu leeyahay shan dabaq, oo isku jira qaabka Hindida iyo Hinduga, waxaa lagu sameeyaa dhagaxa cas ee casaanka ah inkasta oo had iyo jeer laga soo sawiro bannaanka, haddana qofku wuu soo geli karaa oo fuulaa saqafka si uu ugu raaxaysto muuqaalka weyn ee magaalada. Barxadda waxaa ku yaal madxafka qadiimiga ah.
El Nahargarth Fort Waxay ku taal buuraha Aravalli waxayna yihiin meesha ugu fiican Jaipur. Waxaa la dhisay 1734 -kii waxaana la ballaariyay 1868 -kii, waxayna u adeegtay sidii caqabad cajiib ah oo ka dhan ah cadowga. Gudaha waxaa jiray dib u gurasho xagaaga boqornimada, qasri leh qol loogu talagalay laba iyo toban xaas iyo boqor. Dhammaantood waxay ku xiran yihiin wadiiqooyinka leh darbiyada.
Qalcad kale oo aad u weyn ayaa ah Fort Jaigarh, oo qiyaastii 15 kiilomitir u jirta magaalada, kuna yaal buuraha dhagaxa ah iyo oomanaha ah. Waa duug iyo waxay leedahay madfac qadiimi ah oo ah kanalka ugu weyn adduunka. Goob kale oo lagu taliyay waa Macbadka Birla, oo lagu dhisay salka Moti Dungari, oo ku yaal madal aad u sarreysa, dhammaantoodna ku yaal marmar cad. Waxaa dhistay qoyska Birlas, ganacsato aad u hodan ah, 1988, waxayna u heellan tahay Vishnu iyo lammaanihiisa, Lakshmi.
Waxaa jira laba macbudyo oo kale oo dalxiis u ah: the Macbadka Govind Devji iyo Macbadka Moti Doongri Ganesh. Laakiin dabcan, kaligood maahan, waxaa sidoo kale jira Digamber Jain Mandir Temple, 14 kiiloomitir u jirta, Sanganer. Dhinaca kale, xujaajtu waxay u yimaadaan Galtaji, oo ah xarun xajka qadiimiga ah magaalada dhexdeeda, oo ka gudbaya Macbadka Daanyeerka, oo leh xayawaanno badan oo dabacsan. Goobtu waa qurux, buur cagaaran.
El Lake Palace ama Jal Mahal Waa hanti ku taal Jaipur, oo ah dhisme nuurad midab leh, oo ku yaal harada buluugga ah, oo ka soo horjeedda sida ugu wanaagsan. Waxay u dul sabbaysaa sida doon dhexdeeda harada Man Sagar oo aadan geli karin ee ka bogay dibadda. The Qasriga Sisodia Rani beertiisuna waxay siddeed kilomitir u jirtaa Jaipur oo ku taal jidka weyn ee Agra. Waa qaabka Mughal, oo lagu rinjiyeeyay halyeeyada Radha iyo Krishna. Beertu waxay leedahay ilo badan, meelo biyo ah iyo taambuugyo midab leh.
El Beerta Vidyadhar way dhowdahay sidoo kale aad bay u qurux badan tahay. Ku sii wadida mawduuca cagaaran waa Beerta Dhexe, aag cagaaran oo ku yaal badhtamaha magaalada. Waa wax aad u wanaagsan in la dhaafo, xoogaa la joojiyo, sawirro qaado. Waa beerta ugu weyn magaalada waxaana ku jira xataa koorsada golf -ka. Halkan sidoo kale waa Calanka qaranka, weyn. Beer kale oo lagu taliyay waa Beerta Ram Nivas, oo ka bilaabmaysa 1868, badhtamaha magaalada iyo martigelinta Matxafka Albert Hall o Madxafka Dhexe, beerta xayawaanka, beerta shimbiraha, tiyaatar iyo goob farshaxan.
Madxafkan waxaa dhiirrigeliyay Madxafka Victoria & Albert ee London qolladiisana waxaad ku arki kartaa farshaxan gacmeedyo kala duwan, fayl, farshaxan, hub, walxaha fool -maroodiga iyo uruurinta quruxda badan oo qiimo leh oo ka kooban dhammaan dugsiyada farshaxanka ee deegaanka.
Goob kale oo la mid ah ayaa ah Nolosha cabbirkii nololeed ee taallo-aasaasaha Jaipur, Boqor Sawai Jai Singh II. Ama Minaarad Ishwar, meel u dhow Iridda Tripolia, oo la dhisay 1749, oo aad dusha sare ka qaadan kartid sawir lama illaawaan ah.
Mana iloobi karno Xusuusta Queens, aaska aaska oo ay leeyihiin haweenka qoyska boqortooyada, oo ku yaal waddada Fort Ambar. Waa dab -qabad oo leh cenotaphs qurux badan, oo ka samaysan marmar iyo dhagaxa deegaanka. Meel xiiso leh oo lagu barto taariikhda maxalliga ah iyo Hindida waa Matxafka Wax Jaipur, gudaha Fort Nahargarh, oo ay ka kooban tahay 30 taallo, oo ay ku jiraan Gandhi, Bhagat Singh ama Michael Jackson.
Goob kale oo caan ah oo ku taal Jaipur waa Shineemada Raj Mandir, shineemo raaxo leh oo ku habboon in lagu raaxeysto filim shaneemo Hindi oo wanaagsan. Waxay ka soo bilaabatay 1976 waana mid aad u xad -dhaaf ah, oo leh jaranjarooyinka iyo dhallaanka meel kasta. Waxaa sidoo kale jira Madhvendra Palace in Boqor Sawai Ram Singh u dhisay sagaalkiisa boqoradood, qiyaastii 15 kiiloomitir haddii aad rabto inaad xoogaa dhaqaajiso, ama Macbadka Akshardham, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la soo booqdo si ay u noqoto bilicda dhismeheeda.
Waxaan ka hadleynaa jardiinooyinka, macbudyada, qalcadaha ... laakiin waxaan u baahannahay inaan ka hadalno matxafyo badan: waxaa jira Madxafka GEMS iyo Dharka, oo u dhow Albaabka Cusub, the Madxafka Amrapali, sidoo kale u heellan dahabka Hindiya, the Madxafka Dhaxalka, oo u heellan dhaqanka Rajasthan iyo Matxafka Anokhi ee far -gacmeedka, oo ka shaqeeya daar qurux badan iyo Jantar Mantar, oo ah goob dhaxalgal ah oo adduunka ah in Waa kan ugu weyn shanta indho -indhayn ee uu dhisay Boqor Maharaja Sawai Jai Singh II, boqorkii aasaasay magaalada. Waa cajiib.
Macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan Jaipur
Sida loo tago: Jaipur waxay leedahay garoon diyaaradeed oo caalami ah, Sanganer Airport. Waxaa jira duulimaadyo gudaha ah oo taga Hindiya oo dhan. Waxa kale oo lagu tagi karaa waddo ka timaada magaalooyinka kale ee gobolka iyo tareenka Agra, Delhi, Bombai, Calcutta, Udaipur, Bangalor, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Waxa lagu arko Jaipur
Magaalooyinka quruxda badan ee Beesha Valencian